म्यानमारमाथि नेपालको शानदार जित तस्वीरमा हेर्नुहोस , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
म्यानमारमाथि नेपालको शानदार जित तस्वीरमा हेर्नुहोस
काठमाडौं । आईसिसी विश्व टी–ट्वान्टी क्रिकेट अन्तर्गत एसिया छनोट समूह बी को पहिलो खेलमा नेपालले म्यानमारलाई ८ विकेटले पराजित गरेको छ । ३० रनको विजयी लक्ष्य पाएको नेपालले ३ ओभरमा २ विकेट गुमाएर जित हात पार्यो ।
टस जितेर पहिला ब्याटिंग गरेको म्यानमारले १० ओभरमा २९ रन बनाउँदा सबै विकेट गुमाएको थियो ।
नेपालले अनिल शाह र प्रदिप ऐरीको विकेट गुमाएको हो । नेपालका लागि करण केसीले विजयी छक्का प्रहार गरे । उनले ८ बलमा १४ रन बनाएका थिए । यस्तै अनिल शाहले ५ बलमा ११ रन बनाएका थिए ।
वर्षाका कारण ढिलो शुरु भएको खेलमा नेपालले शुरुदेखि नै म्यानमारलाई दबाबमा राखेको थियो । स्कोर बोर्डमा ४ रन हुँदा पहिलो विकेट गुमाएको म्यानमारले अन्तिम १ रन जोड्दा ६ विकेट गुमायो ।
नेपालका लागि सबैभन्दा सफल बलर स्पीनर सन्दिप लामिछाने भए । उनले २ ओभरमा ३ रन दिएर ४ विकेट लिए । उनले आफ्नो दोस्रो ओभरमा ३ विकेट लिएका थिए । यस्तै ललित नारायण राजवंशीले पनि उत्कृष्ट बलिंग गर्दै ३ ओभरमा २ मेडनसहित ३ रन दिएर ३ विकेट लिए । करण केसीले एक विकेट लिएका थिए भने म्यानमारले अन्तिम विकेट रनआउटका रुपमा गुमाएको थियो ।